Efa fantatray fa nakotroka mihitsy ny fandraisana anareo ho eo anivon’ny tontolo malalaka indray, ka zary nofy ratsy ny fihinanana gagazo teny Ambaniatsinanana. Fa ny mahagaga ahy r’ise dia i Jean kely sefonareo toa tsy miteny tsy mivolana ity a ! Hafahafa ihany mantsy izany hoe fotoana elaela ihany iny nahataraiky anao iny kanefa dia tsy niloa-bava mihitsy ny tenany. Mba omeo vaovao ihany izahay fa tsy arakay intsony ny tantaranareo mianakavy. Toa zary mifanary fa tsy toy ilay fiedinedina teny an-kianja fahiny, fa mifandefona ivoho aza angamba. Henonay anie fa akamanareo tao ihany no manontsana ao e ! Dia izao anefa ingahirainy mbola ao anaty ekipa ao ihany ary mody mafana fo, ka izay no ilazako hoe : efa tena mifandefona ivoho ianareo. Hafatra kely : rehefa mba afaka dia jereo ihany ilay akamanareo mbola taraiky sao bobongolo ao iny. Amin’ny manaraka indray fa manaova fety sambatra e !